လူတဈယောကျက တဈစုံတဈရာကို ဖုံးကှယျဖို့ ကွိုးစားနရေငျတောငျ ဒါမှမဟုတျ သတိမထားမိရငျတောငျ ကိုယျဟနျအမူအရာက အဲဒီလူရဲ့ အကွောငျးအတျောမြားမြားကို ပွောပွပေးနိုငျပါတယျ။
စိတျပညာရှငျ Allan Pease က သူ့ရဲ့အရောငျးရဆုံး စာအုပျဖွဈတဲ့ "ကိုယျဟနျအမူအရာ - လူတှရေဲ့ အမူအရာတှကေနေ သူတို့အတှေးကို ဘယျလိုဖတျကွမလဲ" ဆိုတဲ့စာအုပျမှာ လူတှရေဲ့ လမျးလြှောကျပုံ လမျးလြှောကျနညျးတှေ၊ စကားပွောဆိုပုံတှကေို ခှဲဖွာလလေ့ာပွထားပါတယျ။
လူတဈယောကျရဲ့ အကွိုကျဆုံး ကိုယျဟနျအနအေထားက သူ့ရဲ့စရိုကျကို ဖျောပွပေးတယျလို့ Pease က ဆိုပါတယျ။ စိတျဝငျစားစရာ အကောငျးဆုံးအပိုငျးကတော့ အမြိုးသမီးတှမှော လုံးဝကှဲပွားခွားနားတဲ့ ထိုငျပုံထိုငျနညျးတှေ ရှိတယျဆိုတာပါပဲ။
သငျရော ဘယျလိုထိုငျလရှေိ့ပါသလဲ။ သငျအကွိုကျဆုံး ထိုငျပုံထိုငျနညျးကို ရှေးပွီး ကိုယျလကျအမူအရာ ကြှမျးကငျြပညာရှငျက ဘယျလိုပွောထားလဲဆိုတာ ရှာဖှကွေညျ့လိုကျပါဦး။
ဒီပုံစံကတော့ သူစိမျးတှကေို လှယျလှယျနဲ့ စကားပွောလမေ့ရှိတဲ့၊ စစေ့ပျသခြောတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ ထိုငျတဲ့ပုံစံပါ။ သငျဟာ အယုံမလှယျသူပါ။ သငျ့ကို ပိုးပနျးသူတှေ ခပျမြားမြားက လကျလြှော့သှားတာကလညျး စစေ့ပျသခြောတဲ့ ဒီလိုထိုငျနညျးကွောငျ့ပါပဲ။
ဒီပုံစံကတော့ လူတှကေ သငျ့ကို ဘယျလိုထငျထငျ ဂရုမစိုကျတဲ့ပုံစံပါ။ ဘဝကို ဘယျလိုပြျောပြျောနရေမလဲ ဆိုတာ သငျသိပါတယျ။ သငျ့ကို ပိုးပနျးနတေဲ့သူတှကေတော့ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ အဲဒီလူတှထေဲကနေ ရှေးနိုငျပါတယျ။
သငျဟာ လူတှကေို အာရုံစိုကျတတျပွီး ကူညီဖို့ အမွဲအဆငျသငျ့ ဖွဈနသေူပါ။ ဒါ့အပွငျ သငျက အမှားတှကေို ခှငျ့မလှတျတတျသူပါ။ သငျ့ရဲ့အကောငျးဆုံး အားသာခကျြကတော့ ရိုးသားပွီး ယဉျကြေးသိမျမှတေ့ာပါပဲ။
သငျဟာ လူတဈယောကျကို တကယျခဈြမိပွီ ဆိုရငျ အဲဒီလူဆီမှ ခြှတျယှငျးခကျြ ကွီးကွီးမားမားရှိနရေငျတောငျ အပွဈမမွငျဘဲ ခဈြနမေယျ့သူပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ ရနျသူကတော့ သငျ့ဆီက သနားကွငျနာမှု၊ ခှငျ့လှတျမှုစတာတှေ တဈခုမှ ရမှာမဟုတျပါဘူး။
သငျဟာ ခဈြစရာကောငျးပွီး ခြီးမှမျးစကားတှကေို နှဈသကျသူပါ။ ယဉျကြေးသိမျမှတေ့ယျ ဆိုတာ သငျ့အတှကျ အထူးဖှငျ့ဆိုပေးထားတာပါ။ သငျ့လကျတှဲဖျော ကတော့ လူကွီးလူကောငျးပီသသူ၊ ရဲရငျ့တညျကွညျသူ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိတဲ့ ယောကျြားကောငျးတဈယောကျ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
လူတစ်ယောက်က တစ်စုံတစ်ရာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနေရင်တောင် ဒါမှမဟုတ် သတိမထားမိရင်တောင် ကိုယ်ဟန်အမူအရာက အဲဒီလူရဲ့ အကြောင်းအတော်များများကို ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင် Allan Pease က သူ့ရဲ့အရောင်းရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ "ကိုယ်ဟန်အမူအရာ - လူတွေရဲ့ အမူအရာတွေကနေ သူတို့အတွေးကို ဘယ်လိုဖတ်ကြမလဲ" ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ လူတွေရဲ့ လမ်းလျှောက်ပုံ လမ်းလျှောက်နည်းတွေ၊ စကားပြောဆိုပုံတွေကို ခွဲဖြာလေ့လာပြထားပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး ကိုယ်ဟန်အနေအထားက သူ့ရဲ့စရိုက်ကို ဖော်ပြပေးတယ်လို့ Pease က ဆိုပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာ လုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့ ထိုင်ပုံထိုင်နည်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။
သင်ရော ဘယ်လိုထိုင်လေ့ရှိပါသလဲ။ သင်အကြိုက်ဆုံး ထိုင်ပုံထိုင်နည်းကို ရွေးပြီး ကိုယ်လက်အမူအရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်က ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတာ ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါဦး။
1. ဒီပုံစံကတော့ သူစိမ်းတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ စကားပြောလေ့မရှိတဲ့၊ စေ့စပ်သေချာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ထိုင်တဲ့ပုံစံပါ။ သင်ဟာ အယုံမလွယ်သူပါ။ သင့်ကို ပိုးပန်းသူတွေ ခပ်များများက လက်လျှော့သွားတာကလည်း စေ့စပ်သေချာတဲ့ ဒီလိုထိုင်နည်းကြောင့်ပါပဲ။
2. ဒီပုံစံကတော့ လူတွေက သင့်ကို ဘယ်လိုထင်ထင် ဂရုမစိုက်တဲ့ပုံစံပါ။ ဘဝကို ဘယ်လိုပျော်ပျော်နေရမလဲ ဆိုတာ သင်သိပါတယ်။ သင့်ကို ပိုးပန်းနေတဲ့သူတွေကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒီလူတွေထဲကနေ ရွေးနိုင်ပါတယ်။
3. သင်ဟာ လူတွေကို အာရုံစိုက်တတ်ပြီး ကူညီဖို့ အမြဲအဆင်သင့် ဖြစ်နေသူပါ။ ဒါ့အပြင် သင်က အမှားတွေကို ခွင့်မလွှတ်တတ်သူပါ။ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး အားသာချက်ကတော့ ရိုးသားပြီး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တာပါပဲ။
4. သင်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိပြီ ဆိုရင် အဲဒီလူဆီမှ ချွတ်ယွင်းချက် ကြီးကြီးမားမားရှိနေရင်တောင် အပြစ်မမြင်ဘဲ ချစ်နေမယ့်သူပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ ရန်သူကတော့ သင့်ဆီက သနားကြင်နာမှု၊ ခွင့်လွှတ်မှုစတာတွေ တစ်ခုမှ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
5.သင်ဟာ ချစ်စရာကောင်းပြီး ချီးမွမ်းစကားတွေကို နှစ်သက်သူပါ။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တယ် ဆိုတာ သင့်အတွက် အထူးဖွင့်ဆိုပေးထားတာပါ။ သင့်လက်တွဲဖော် ကတော့ လူကြီးလူကောင်းပီသသူ၊ ရဲရင့်တည်ကြည်သူ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။